Fanjavonan’i «Eddy Bois de rose» tetsy amin’ny HJRA : mitaky hamotsoran’ny polisy ny Pr Auberlin ireo mpitsabo | NewsMada
Par Taratra sur 09/10/2021
Tranga nanaitra ny maro ny niseho tetsy amin’ny HJRA, omaly. Notsaboina tao amin’ io hopitaly io nefa tsy hita nanjavonana ilay gadra eny Tsiafahy, i Maminirina Eddy na i “Eddy Bois de rose”. Nahiana ho voasaringotra amin’izany ilay mpitsabo lehibe, ka nantsoin’ny polisy ary notazonina any.
Nitokona ary tsy niasa avokoa ireo mpiara-miasa. Naneho ny tsy fahafaliany ary niray feo nitaky ny hamoahana ny Profe­so­ra Rakototiana ireo mpiasan’ ny fahasalamana etsy amin’ny HJRA, notronin’ireo avy eny amin’ny hopitaly Befelata­nana. Noahiahiana ho mpiray tendro amin’ny nampanjavona sy nampandositra ilay voafonja Eddy io profesora io sy ny tale iray ka izao nampanantsoina sy nohazonin’ny “Surveillance du territoire” etsy Anosy izao. Mazava ny nambaran’ireo nanao hetsika. “Mpitsabo izahay fa tsy mpi­ambina gadra. Asan’ny mpi­an­dry fonja ny manao andrimaso ny voafonja fa tsy asanay izay manao ny asanay amin’ny fitsaboana ny marary eo anivon’ny faritry ny hopitaly. Atsaharo ny fitsabahana amin’ny andraikitray”, hoy izy ireo.
Mpiandry fonja miisa efatra
Etsy andaniny, nandalo tao amin’ny efitra tokony hisy azy ny polisy nefa hita naka rivotra teny amin’ny “Parking” ao amin’ny faritry ny HJRA ity voafonja ity. Mpiandry fonja miisa efatra no miambina azy eny amin’ny hopitaly.
Tsiahivina fa marary tsaboina eo amin’io hopitaly io ary nandalo fandidiana tao i Eddy amin’ny nanesorana ny avokavony. Na izany aza, mbola sempotra ihany izy ka izao mbola notsaboina izao. Tsy nahazoana vaovao ny eo anivon’ny polisy raha nanontaniana izao raharaha izao, hatramin’ny omaly alina. “Mbola anatin’ny fanadihadiana”, hoy izy ireo.
Dimy taona an-tranomaizina sy lamandy
Mbola mamita ny saziny, dimy taona an-tranomaizina sy mandoa lamandy 5 miliara Ariary i Eddy, araka ny didim-pitsarana ny taona 2019. Vesatra niampangana azy ny fitrandrahana sy fanondranana ary koa fivarotana tsy ara-dalàna ny andramena.